वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक उमारे अन्तरिक्षमा मुला - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल || 18 May, 2022
वैज्ञानिकहरूले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा मुला उमारेएका थिए । अन्तरिक्षमा उमारिएका ती मुला अर्को वर्ष मात्र पृथ्वीमा ल्याइयो ।
नासाको अन्तरिक्ष यात्री तथा फ्लाइट इन्जिनियर केट रुविन्सले पहिलो पटक इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा उमारिएको मुलाको फसल काटेको हो । केटले मुलाका २० बिरुवा प्याक गरी सन् २०२१ मा पृथ्वीमा ल्याउन कोल्ड स्टोरेजमा राखिसकेका थिए ।
नासाको यो प्रयोगको नाम प्लान्ट हेबिटेट ०२ राखिएको थियो । वैज्ञानिकहरूलाई विश्वास थियो, २७ दिन मै मुला तयार हुनेछ, त्यसैले यसलाई अन्तरिक्षमा केन्द्रमा उमार्न चयन गरिएको थियो । उक्त मुलामा पोषक तत्त्व पनि थियो र खान लायक पनि । पातहरू हुने मुला फरक खालको फसल भएको नासाका योजना प्रबन्धक निकोल डुफोरले बताए । यसअघि अन्तरिक्षमा गहुँ उमारिएको थियो ।
फरक फरक प्रकारका तरकारी उमारेर अन्तरिक्षमा कस्ता खालका बिरुवा उमार्न सकिन्छ जुन लामो समयसम्म रहने अन्तरिक्ष यात्रीहरूका लागि उपयोगी बन्न सक्छ भन्ने कुराको परीक्षण भइरहेको थियो । नासाका अनुसार मुला उमार्न अत्यन्तै कम मात्र रेखदेखको आवश्यक पर्छ ।
अन्तरिक्षको जुन कक्षमा यसलाई उमारिएको हो, त्यहाँ रातो, निलो, हरियो र सतो एलइडी लाइटको किरण दिइएको थियो, ताकी बिरुवा वृद्धि राम्रो होस् । अन्तरिक्षमा उमारिएका मुलाको तुलना फ्लोरिडाको केनेडी स्पेस सेन्टरमा उमारिएका मुलासँग गरिएको थियो ।
‘नर्कको ढोका’ मानिने यो खाडल - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] राष्ट्र थियो । सन् १९७१ मा यहाँका वैज्ञानिकहरूको टोली प्राकृतिक ग्यासको खोजीमा […]
I believe that is among the most important information for me. And i'm glad reading your article. However should statement on some normal issues, The website style is great, the articles is in reality great : D. Just right task, cheers Also visit my blog post: http://encyclopedia.dev.genetica.asia/wiki/Bangalore_Beats_Delhi_By_1_Run_To_Take_Lead_In_IPL